M/weynaha Somaliland iyo wafti uu hoggaaminayo oo maanta booqasho ku yimid Laascaanood. – Radio Daljir
M/weynaha Somaliland iyo wafti uu hoggaaminayo oo maanta booqasho ku yimid Laascaanood.
Lascanod, Oct 08 ? M/weynaha maamulka Somaliland iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal ku yimid magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasi oo ay kula kulameen maamulka iyo qaar ka mid ah hal-doorka bulshada.
M/weynaha Somaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyo, oo ay imaatinkiisa Laacaanood ay ku weheliyeen xubno ka mid ah golihiisa wasiirrada iyo saraakiil ciidan ayaa ahaa mid aan horay loo sii shaacin, waxaana wakhti kooban ay ku sugnaayeen magaalada.
M/weyne Siilaanyo iyo xubaha dawladdiisa ka mid ah waxaa ay kulamo la qaateen mas?uuliyiinta maamulka gobolkaasi Sool, midka degmada Laascaanood, hoggaannada waaxaha nabad-galyada iyo odayaal-dhaqameed deegaanka ah.
Kulamadaasi oo aan taf-dheerayn, ayaa la iskula soo qaaday arrimo dhawr ah oo iskugu jira amniga iyo arrimaha bulshada, iyadoo si gaar ahna looga wadahadlay hormarinta gobolka ee dhinac walba.
Waa safarkii ugu horreeyey ee m/weynaha maamulka Somaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyyo uu yimaado magaalada Laacaanood tan iyo intii loo doortay hoggaanka m/weynenimo ee Somaliland.